युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्या देखिएको छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार - Khabar Break | Khabar Break
यदि तपाईको उमेर नपुग्दै कपाल फुल्ने अर्थात सेतो देखिने समस्या देखिएको छ भने अब त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिने छ । मानिसको पर्सनालिटीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अंग हो कपाल । कालो कपालले मानिसको पर्सनालिटीलाई अझै बढाउँछ । तसर्थ युवा उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन यी सजिला घरेलु उपाय अपनाउनुस् । जो निकै फाइदाजनक छ ।
– नरिवलको तेलमा करी एकप्रकारको जडीबुटीको पातलाई मिसाएर कालो हुँदासम्म उमाल्नुस् । चिसिएपछि यसलाई आफ्नो टाउको र कपालमा मालिस गर्नुस् । र ४५ मिनेटपछि मात्रै कपाल धुनुस् ।
तामाको भाँडामा भुलेर पनि राख्न नहुने ५ कुरा
यी कारणले टुट्छ सम्बन्ध !
कुकुरले मान्छे टोके समाचार बन्दैन….तर गोप्ताङ्गमै टोके नि !
धेरै रिसाए मोटाइन्छ
जव उनको केटी बन्ने सपना पुरा भयो …